‘ओलीका कारण लोकतन्त्र संकटमा, कांग्रेसको बढ्दो लोकप्रियता र बहुमत इच्छा हिन्दु राज्य’ « AayoMail
‘ओलीका कारण लोकतन्त्र संकटमा, कांग्रेसको बढ्दो लोकप्रियता र बहुमत इच्छा हिन्दु राज्य’
2021,26 March, 12:22 am
हालै गरिएको एउटा नयाँ सर्वक्षणले नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता फेरि बढ्न थालेको देखाएको छ।
सेयरकास्ट इनिसियटिभले गरेको ताजा सर्वेक्षणले अहिले जनताले फेरि पनि नेपाली कांग्रेसलाई ‘भर’ गर्न थालेको देखाएको हो।
गत फागुन ९ देखि २३ गतेसम्म उसले गरेको सर्वेक्षणमा देशभरका विभिन्न उमेर समूहका नागरिकलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधिएको थियो। खासगरी राजनीतिक दल, देशको राजनीतिक अवस्थाबारे जनधारणा बुझ्नका लागि यो सर्वेक्षण गरिएको सेयरकास्टले जनाएको छ। उसले यो सर्वेक्षण देशभरका करिब ८ हजार ८२ जनामा गरेको थियो।
सेयरकास्टका अनुसन्धाता मधु आचार्यका अनुसार यो सर्वेक्षणका लागि यी एकजना व्यक्त्तिहरूसँग मोबाइल तथा टेलिफोनमार्फत करिब १५-२० सम्म कुरा गरिएको थियो।
‘यो हामीले हरेक वर्ष गर्ने एउटा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण हो’ उनले भने ‘देशको समसामयिक विषयवस्तुबारे आम नागरिकको राय बुझ्नका लागि यो सर्वेक्षण गर्ने गरिएको छ।’
८ वटा विषयमा विभिन्न प्रश्न तथा उप–प्रश्नहरू राखिएको उक्त्त सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलका बारेमा प्रश्न सोधिएको थियो– तपाईंका बिचारमा नेपालमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि सबैभन्दा भरपर्दो राजनीतिक दल कुन होला?
सर्वेक्षणको यो खण्डमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूको विकल्प पनि सर्वेक्षणमा सहभागीलाई दिइएको थियो। तीमध्ये ३५.४ प्रतिशत सहभागीले लोकतन्त्र वा गणतन्त्र बलियो बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई भरपर्दो मानेका छन्।
त्यस्तै केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा(त्यो बेला नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी एउटै पार्टीमा थिए)लाई २५.३ प्रतिशत, प्रचण्ड र माधव नेपालहरूलाई १०.८ प्रतिशत, जनता समाजवादी पार्टीलाई ३.४ प्रतिशत तथा राप्रपालाई १. ८ प्रतिशतले भरपर्दो मानेका छन्।
त्यस्तै सबै प्रादेशिकरुपमा नेपाली कांग्रेसलाई १३.४ प्रतिशत, प्रचण्ड-माधवहरूलाई, ४.१ प्रतिशतले भरपर्दो भनेका छन्। त्यस्तै १.३ प्रतिशतले जनता समाजवादी पार्टीलाई तथा 0.७ प्रतिशतले राप्रपालाई भरपर्दो भनेका छन्।
४९.९ प्रतिशत सहभागीले यसबारेमा ‘थाहा छैन’ भनेका छन्। र, १२.३ प्रतिशतले उत्तर दिन चाहेका छैनन्।
प्रदेश १मा नेपाली कांग्रेसलाई १६.५ प्रतिशतले भरपर्दो भनेका छन्। त्यस्तै प्रदेश २मा १७.३ प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा २०.१ प्रतिशतले कांग्रेसलाई भरपर्दो मानेका छन्। यही सन्दर्भका आधारमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपालाई सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा १५.७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश २मा ६.३ प्रतिशत सहभागीले भरपर्दो भनेका छन्। प्रचण्ड माधवहरूको नेतृत्वप्रति पनि सबैभन्दा धेरै कर्णालीमा १२.७ र सबैभन्दा कम प्रदेश १मा १.३ प्रतिशतले भर मानेका छन्। प्रदेश २मा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको जनता समाजवादी पार्टीप्रति यही प्रदेशमा २.५ प्रतिशत सहभागीले मात्रै भरपर्दो भनेका छन्।
लोकतन्त्र वा गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा जातिगत हिसावमा पनि कांग्रेसप्रति नै सबैभन्दा धेरै भरोसा देखिएको छ। त्यसमा सबैभन्दा धेरै त तराईवासीले कांग्रेसलाई भर गरेका छन्। तराई समुदायका १९ प्रतिशत, तराइका १६.९ प्रतिशत जनजाति तथा १३.७ प्रतिशत तराइका दलित समुदायले पनि कांग्रेसलाई भर गरेका छन्। त्यस्तै १५ प्रतिशत पहाडे ब्राह्मण, ६.१ प्रतिशत नेवार कांग्रेसप्रति सहमत भएका छन्।
ओली पक्षको भने तराइमा लोकप्रियता निकै घटेको देखिएको छ। यही सन्दर्भमा तराई समुदायका ४.६ प्रतिशतले मात्रै ओलीको भर गरेका छन्। त्यस्तै पहाडे ब्राह्मण १०.६ प्रतिशत र पहाडका दलित समुदाय १५.५ प्रतिशतले उनको नेतृत्वमा भर देखाएका छन्।
त्यस्तै साक्षरताका आधारमा स्नातक तह वा सोभन्दा माथि योग्यता हुनेहरू सबैभन्दा धेरै १६.६ प्रतिशतले कांग्रेसले नै लोकतन्त्र वा गणतन्त्र बलियो बनाउँछ भन्नेमा भर गरेका छन्।
यो सर्वेक्षणले नागरिकको भावनालाई राजनीतिक दलहरूले कत्तिको सम्बोधन गर्छन् भन्ने कुरा पनि जान्न खोजिएको छ। त्यसबारे ‘राजनीतिक दलले तपाई र तपाईको परिवारको भावना (आस्था र रुची)को प्रतिनिधित्व गर्छन?’ भनेर सोधिएको थियो।
त्यसका लागि सहभागीलाई उपलब्ध तीनवटा विकल्पमध्ये ७६.१ प्रतिशत सहभागीले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भनेका छन्। त्यस्तै १६.४ले गर्छन् भनेका छन् भने ७.५ प्रतिशतले केही पनि भन्न चाहेका छैनन्।
‘प्रतिनिधित्व गर्छन्’ भनेर जवाफ दिने करिब ८३४ जनाको बीचमा गरिएको अर्को सर्वेक्षणमा नेपाली कांग्रेसले उनीहरूका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्नेहरू धेरै देखिएका छन्। जस्तो कि ३० प्रतिशत सहभागीले उनीहरूको भावना नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधित्व गर्छ भनेका छन् र २७.९ प्रतिशतले केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले भनेका छन्। त्यस्तै प्रचण्ड-माधव नेपालहरूलाई ११.४ प्रतिशत सहभागीले रोजेका छन्। यसबारेमा २० प्रतिशत सहभागीले भने केही भन्न चाहेका छैनन्।
पछिल्लो समयमा देखा परेका ‘हिन्दु राज्य’ हुनुपर्छ भन्ने अभियानहरूका सन्दर्भमा यो सर्वेक्षणले हिन्दु राज्यबारे पनि आम नागरिकको धारणा बुझ्न खोजेको छ।
त्यसका लागि ‘तपाईंको बिचारमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ वा अहिलेकै जस्तो धर्म निरपेक्षता भएको ठीक छ?’ भनेर सोधिएको थियो।
तीमध्ये ५१.७ प्रतिशतले हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् र ४०.३ प्रतिशतले अहिलेको जस्तै धर्म निरपेक्षता नै ठीक छ भनेका छन्। र, ८.१ प्रतिशत सहभागी भने यसबारेमा बोल्न चाहेका छैनन्।
हिन्दुराज्य हुनुपर्छ भन्ने ६८.५ प्रतिशत सहभागी प्रदेश २को प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यस्तै प्रदेश १का ४४.४ प्रतिशत, बागमतीमा ४०.८ प्रतिशत, गण्डकीमा
५१.५ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ५२ प्रतिशत, कर्णालीमा ४९.७प्रतिशत र सुदुरपश्चिमा ५२.७ प्रतिशत सहभागीले हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका छन्।
उमेर समूहका हिसाबले ६० वर्षभन्दा माथिका ६०.७ प्रतिशत सहभागीले हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका छन्।
त्यस्तै तराइका ७१.६ प्रतिशत र ५९.२ प्रतिशत पहाडे ब्राह्मणले हिन्दु राज्य चाहिन्छ भनेका छन् भने ८१.६ प्रतिशत मुस्लिम समुदायका सहभागीले धर्म निरपेक्ष नै हुनुपर्छ भनेका छन्। साक्षर ५६ प्रतिशतले हिन्दु राज्य चाहिन्छ भनेका छन् स्नातक तह वा त्यो भन्दा धेरै योग्यता भएका ५१.१ प्रतिशतले धर्म निरपेक्ष भनेका भनेका छन्। यही समूहका ४६ प्रतिशतले भने हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनेका छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा
‘नेपालका लागि लोकतन्त्र नै सबैभन्दा उत्तम शासन प्रणाली हो’ भन्ने कुरामा ७५.१ प्रतिशतले सहमति जनाएका छन्। १२.१ प्रतिशत सहभागी यो शासन प्रणाली उत्तम हो भन्ने कुरामा विश्वस्त छैनन्। १२.८ प्रतिशत सहभागी भने यसबारेमा बोल्न चाहेका छैनन्।
तर, ३२.३ प्रतिशत सहभागीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकट आएको बताएका छन्। ४५.५ प्रतिशतले भने यो व्यवस्थामा संकट आएको छैन भनेका छन्। २२.२ प्रतिशत सहभागीले यसबारेमा केही भनेका छैनन्।
र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था संकटमा पर्‍यो भन्ने करिब २,३१२ जनालाई सर्वेक्षणमा त्यो संकट कसको कारण आएको हो भनेर पनि सोधिएको थियो।
त्यसमा सहभागीका लागि थुप्रै विकल्पहरू राखिकाए थिए।
तीमध्ये ४६.५ प्रतिशत सहभागीले सरकारका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकट आएको भनेका छन्। ४४.५ प्रतिशतले केपी नेतृत्वको पार्टीका कारण भनेका छन्। ४१.९ प्रतिशतले प्रचण्ड-माधवहरूको पार्टीका कारण भनेका छन्। १७.३ प्रतिशत सहभागीले नेपाली कांग्रेसको कारण मानेका छन्।
सरकारकै कारण भन्नेहरू करिब ६९.३ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहभागी छन्।
गलत दिशामा राजनीति
देशको राजनीति कुन दिशामा गइरहेको भन्ने बारे नागरिक चासोलाई पनि यो सर्वेक्षणले समेटेको छ। त्यसका लागि सर्वेक्षणमा पहिलो प्रश्न सोधिएको छ ‘राजनीतिक हिसाबले तपाईंलाई हाम्रो देश अहिले सही दिशातिर गइरहेको जस्तो लाग्छ? या गलत दिशातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ?’
यसमा ४४.३ प्रतिशतले देशको राजनीति गलत दिशातिर गइरहेको बताएका छन् भने २१.९ प्रतिशत सहभागीले सही दिशातिर गइरहेको भनेका छन्। त्यस्तै ११.३ प्रतिशत सहभागीले यसबारे थाहा छैन भनेका छन्।
यही बीचमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिनुभन्दा तीन दिन अघि र पछि पनि यही प्रश्नमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। यसमा करिब १४६६ जना सहभागी भएका थिए।
सर्वोच्चको यो निर्णय आउनुअघि १९.२ प्रतिशतले देशको राजनीति सही दिशामा गइरहेको छ भनेका थिए भने तीन दिनपछि २२.७ प्रतिशतले सही दिशामा गइरहेको भनेका थिए।
त्यस्तै तीन दिनअघि ३ दिनअघि ५३.२ प्रतिशतले देशको राजनीति गलत दिशामा गइरहेको भनेका थिए भने सर्वोच्चको फैसला आएको तीन दिनपछि ४४.८ प्रतिशत सहभागीले यो जवाफ दिएको थिए।
त्यसमा ४९ प्रतिशतले देशको राजनीतिक गलत दिशामा जानुको कारण पार्टीबीचको द्वन्द्वलाई भनेका छन्। त्यस्तै ३६.८ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरता भनेका छन् भने २७.४ प्रतिशतले कमजोर नेतृत्वका कारण भनेका छन्। त्यस्तै १३.१ प्रतिशतले सरकारका कारण भनेका छन्।
एक अध्ययन : डेल्टा भेरिअन्टले अरूभन्दा दोब्बर ‘सिकस्त’ बनाउन सक्छ
अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार अरूको तुलनामा यो भेरिअन्टमा मानिसहरू अझ बढी गम्भिर संक्रमित हुन्छन् र उनीहरूलाई अस्पताल नै पुर्‌याउनुपर्ने आवश्यकता अझ
आवश्यकता परेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नुपर्छः ओली
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता परेमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
फेरि पनि असाधारण जनमतका साथ सिंहदरबार छिर्छुः केपी ओली
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पहिले पनि आफू जस्केला, भेन्टिेलसनबाट नभई मूलगेटबाट छिर्छु भनेकोमा करिब दुईतिहाई जनमतबाट मूलगेटबाटै छिरेको
राष्ट्रियसभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी
राष्ट्रियसभा सदस्यमा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। आज भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' लाई हराउँदै